Home » Vaovao momba ny indostria fihaonana » Las Vegas dia mandray ny Fetiben'ny fizahan-tany ara-kolontsaina US-China 2019
Nisokatra ny zoma tao Las Vegas, Nevada ny Fetiben'ny Fizahan-tany ara-kolontsaina amerikana sy sinoa 2019, nokendrena hanitarana ny fifanakalozana kolontsaina sy fizahan-tany eo amin'ny firenena roa tonta.
Ny festival mandritra ny telo andro dia misy lohahevitra maro samihafa, ao anatin'izany ny tanàna fizahan-tany sinoa sy amerikanina, toerana mahafinaritra, lova manerantany ary lova kolontsaina tsy azo zahana.
Nahasarika ny mpanatrika fampirantiana 145 avy amin'ny indostrian'ny kolontsaina, fizahan-tany ary asa tanana sinoa sy amerikanina 65, ka XNUMX amin'izy ireo no avy any Chine, hoy ny Komitin'ny Enterprise sy Commerce United, Las Vegas, mpikarakara ny hetsika.
"Ny fizahan-tany sy ny fitsangatsanganana no fiara natokana hampiroboroboana ny fifanakalozana kolontsaina amin'ireo firenena samihafa," hoy ny kaonsily jeneraly sinoa ao San Francisco Wang Donghua tamin'ny lanonam-panokafana.
"Ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny sehatry ny kolontsaina sy ny fizahantany dia tena zava-dehibe amin'ny fampitomboana ny fifankahazoana, ny fifampatokisana ary ny fanitarana ny fifanakalozana sy ny fiaraha-miasa amin'i Sina-Etazonia," hoy izy nanamarika fa manan-danja indrindra ny festival rehefa atao mandritra io fotoana io amin'ny dingana efatra-polo taona lasa teo amin'ny fifandraisana diplomatika amerikana-shina.
Richard Cherchio, mpanolotsaina iray ao amin'ny tanànan'i Las Vegas Avaratra, dia nilaza fa nanantena izy fa ny hetsika dia “hampifanakaiky ny kolontsaina roa, mba hahafahantsika mifameno sy mifampianatra.”